Phansi Ngokushaya Abantu Besifazane – The Ulwazi Programme
Minyaka yonke, njalo ngomhlaka-25 kuLwezi kuya kumhlaka-10 kuZibandlela, umhlaba wonke usuke ubungaza umkhankaso obizwa ngokuthi i-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence.
Ezweni lethu iNingizimu Afrika, lo mkhankaso waziwa ngokuthi i-16 Days of Activism for No Violence against Women and Children Campaign. Inhloso yalo mkhankaso wukuqwashisa umphakathi nokulwa nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane.
Ngeshwa-ke, i-Ningizimu Afrika ingamanye yamazwe anezinga eliphezulu lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Imibiko eminingi ikhomba ukuthi imvamisa izisulu zihlukunyezwa yilabo abaseduze.
Le sifo esingenakunconywa kodwa okumele sigxekwe size siphele siwumbulalazwe ngoba sinyukubeza amalungelo abantu, sivimbela nenqubekela phambili njengoba senza abanye basalele ngemuva. Kwazise phela ukuthi ukuhlukunyezwa kuba nomthelela omubi ekuthuthekeni kwempilo yomuntu.
Ngaphansi kune-video yaManqoba Jili (25), insizwa yaseHlokozi, eningizimu yesifundazwe saKwaZulu-Natali – imbongi eyilungu le qembu lezimbongi i-Word Architects.
Anike nibukele, nilalele, nizwe amazwi anobuhlakani avela kule nsizwa agxeke le senzo esiyiqalekiso sokushaya abantu besifazane. Njengoba isho neNcwadi eNgcwele: “Onezindlebe makezwe.”
The above article outlines a brief history of the international 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, and repudiates the scourge of women and children abuse. The article is accompanied by a recorded spoken word performance of Manqoba Jili, a Durban resident who is originally from Hlokozi, south of KwaZulu-Natal.